Candy Crush အဆင့် 3914 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
Candy Crush Saga အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်များ Cheats ကိုကူညီပါ
သကြားလုံး Crush Cheat
level 29 ကူညီပါ
level 33 ကူညီပါ
level 65 ကူညီပါ
Candy Crush သကြားလုံးဖော်ပြချက်
PC တွင် Candy Crush ကိုကစားပါ
Candy Crush အဘို့အထိပ်သိကောင်းစရာများ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / Candy Crush အဆင့် 3914 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 3914 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 6, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
90s တွေမှာ အနားယူတယ်လို့ ကြားတယ်။, KitKat တစ်လုံး ရှိသည်။! Candy Crush ကစားရန် အနားယူရန် ဤစကားလုံးကို ယခု ပြောင်းလဲသင့်သည်။. ဤဂိမ်းသည် အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားလာသောကြောင့် မည်သူ့ကိုမျှ ၎င်းနှင့်ဝေးရာသို့မလိုက်နိုင်ပါ။. ကစားချင်စိတ်က တနေ့ထက်တနေ့ တိုးလာတယ်။. သင်သည်မည်သူ၏ဖုန်းသို့ဝင်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်သင်ဤအပလီကေးရှင်းကိုသေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။. တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အစပြုသူအဆင့်တွင် ရှိလိမ့်မည်။; တခြားသူတွေက အဲဒါကို လိုလားကြပေမယ့် ဘယ်အရာက အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။? လူတိုင်းဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်မှာ ကပ်နေလိမ့်မယ်။. သူတို့သည် ဤအဆင့်ကို ကျော်လွှားရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် သဲလွန်စများကို ရှာဖွေနေလိမ့်မည်။. ဒီတော့ ငါတို့က မင်းကို ယူလာပေးတယ်။ သကြားလုံး Crush အဆင့် 3914 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ သင်၏အကူအညီအတွက်.
ဤအဆင့်၏နောက်ကွယ်တွင် စိတ်ကူးမှာ ဤအဆင့်တွင်ပါရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖြုတ်ချပြီး မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ 20,000 ဤအဆင့်ကို ပြီးမြောက်ရန် အမှတ်များ. ဒါအတွက်, ပူဇော်ကြပြီ။ 25 ရွေ့လျားမှုများစွာမရှိသောကြောင့် ပြုလုပ်ရာတွင် သတိထားပါ။? စုစုပေါင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။2ပါဝင်ပစ္စည်းများ. ဂိုးသွင်းရင် 20,000 အမှတ်များပေးပြီး ထိုပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ဗားရှင်းအားလုံးကို ချလိုက်ပါ။, သို့မှသာ သင်သည် ဤအဆင့်ကို ပြီးမြောက်ပြီး သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အဆုံးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. မင်းရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကို ကျော်လွှားဖို့, ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား သကြားလုံးကြိတ်ခြင်း၏ လှည့်စားမှုများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ 3914.
ခက်ခဲမှုအဆင့်က ခက်ခဲတဲ့အတွက် ဒါကိုကစားနေချိန်မှာ သင့်ခြေချောင်းတွေကို ထိန်းထားဖို့ သတိရပါ။. စိတ်ကူးထဲက အကောင်းဆုံးပါ။ candy crush အဆင့် 3914 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ ပိုမိုထူးခြားသောသကြားလုံးရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ပုန်း၏အောက်ခြေမှစတင်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။. ဘုတ်ပေါ်ရှိ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် သင်၏ အစင်းကြောင်းသကြားလုံးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
သင်၏ကနဦးခြေလှမ်းသည် waffles များကိုတတ်နိုင်သမျှများများချိုးဖျက်ရန်ရွှေ့သင့်သည်။. ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ ညာဘက်ကော်လံများသို့ ရွှေ့ကြည့်ပါ။.
သင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်အထူးသကြားလုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။. သင်ပြုလုပ်ထားသော အထူးသကြားလုံးများအားလုံးကို ရောစပ်ပြီး နွယ်ချိုအားလုံးကို ချိုးဖျက်ရန် ကြိုးစားပါ။, ဝေ့ဝဲ, ချောကလက်နှင့် waffles.
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဘယ်ဘက်မှ ညာဖက်မှ အောက်ခြေအထိ ခွဲထုတ်ရန် ဤအရာများအားလုံးကို ချိုးဖျက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ စိတ်ကူးဖြစ်သည်။. ဒီလိုပါပဲ။, အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဘယ်ဘက်အပေါ်မှ ညာဖက်သို့ အလယ်ဗဟိုသို့ရွှေ့စေလိုပါသည်။. ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို ဘုတ်အဖွဲ့ကနေ ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။.
အကယ်၍ သင်သည် ဖော်ပြထားသော ရွေ့လျားမှုများအတွင်း ဤပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဝေးရာသို့ ရနိုင်လျှင် i.e. 25 ရွေ့လျား, ထို့နောက်သင်သာလျှင်အဆင့်ကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။. တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် မရွှေ့ရင် ဒီအဆင့်မှာ အချိန်အကြာကြီး ကပ်နေလိမ့်မယ်။. အထူးသကြားလုံးများဖြင့် ၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန် ညာဖက်ခြမ်းရှိ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ယူလာပါ။. ဒါ မလွယ်ဘူးလား? ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသောအကြံဥာဏ်များကိုသာအသုံးပြုပြီး မှော်ပညာကိုကြည့်ပါ။. သင့်အဆင့်ကို တစ်ချက်တည်း ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လှည့်ကွက်တွေရဲ့ အလှပါပဲ။.
တစ် ဦး စာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်. လိုအပ်တဲ့လယ်ကွင်းမှတ်သားထားသည် *
ငါ့နာမည်ကိုသိမ်းပါ, အီးမေးလ်, ငါမှတ်ချက်ပေးရန်လာမယ့်အချိန်အဘို့ဤဘရောက်ဇာအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
Candy Crush သတင်း
Candy Crush အဆင့် 410 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ
Candy Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ
Candy Crush အဆင့် 1442 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ
Candy Crush အဆင့် 500 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 437 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 419 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 136 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
သကြားလုံး Crush ဂျယ်လီ Saga
သူငယ်ချင်းများ Candy Crush
Candy Crush အဆင့် 2229 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 829 သိကောင်းစရာများနှင့်လှည့်ကွက်
သကြားလုံး Crush အဆင့် 677 cheats နှင့်အကြံပေးချက်များ
Candy Crush အဆင့် 136 cheats နှင့်သိကောင်းစရာများ
ချေးငွေ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | မူပိုင်ခွင့်များ©မူပိုင်ခွင့် Candy-Crush.co
Candy-Crush.co သည် Candy Crush အတွက်ပရိတ်သတ် site တစ်ခုဖြစ်သည်. Candy Crush Saga သည် King.com ကော်ပိုရေးရှင်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် King.com နှင့်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှဆက်စပ်မှုမရှိပါ။. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. မင်းဒါကိုမင်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်, သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်.လက်ခံသည် ဆက်ဖတ်ရန်
Privacy & Cookies ဆိုင်ရာမူဝါဒ
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများသည်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဤအမျိုးအစားတွင်ဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကိုသေချာစေသည့် cookies များပါ ၀ င်သည်. ဤ cookies များသည်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမျှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ.
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းရန်အထူးအသုံးပြုသည်, ကြော်ငြာ, အခြား embedded contents တွေကိုမလိုအပ်သော cookies များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်. သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤ cookies များကိုမသုံးမီအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်.